Ukuphulukana nobunzima kuchaphazela iiTattoos: Le Mifanekiso iyangqina | Ukuzoba
Nat Cerezo | | Iitatoo
Ngaba ukunciphisa umzimba kuchaphazela iiTattoos ngokubonakalayo? Kuthekani ukuba siyafumana izihlunu, okanye siyaluphala, okanye siyakhulelwa? Ngaba banokukhubazeka okanye bahlaziywe kwakhona? Ngaba zikhona iitatoo ezithandwa ngakumbi kunezinye ukukhubazeka? Le yeminye yemibuzo ebuzwa ngabantu abaninzi ngezizathu ezahlukeneyo.
Kungenzeka ukuba uza kungena ejimini kwaye ufumane ubunzima obukhulu bemisipha okanye, ngokuchaseneyo, ufuna ukuphulukana neekhilos ezimbalwa. Ngaba yakho Iitato? Ngaba kungcono ukulinda de ube unobunzima obunqwenelekayo ukuze ufumane umvambo? Inyani yile yokuba kukho isuntswana lomxholo wedolophu malunga nalo. Apha ngezantsi siza kuzama ukukunceda ngokuphendula imibuzo ebuzwa rhoqo.
1 Kwenzeka ntoni emzimbeni wam xa ndifumana itattoo?
2 Kuthekani ukuba ndifumana itattoo kwaye umsipha uyakhula?
3 Ndingaqhubeka noqeqesho ukuba ndifumana itattoo?
4 Kwenzeka ntoni kwiitattoos zam ukuba ndiyancipha?
5 Ziphi iitattoos ezingenasiphene?
6 Ngaba zikhona iitatoo ezithandwa kakhulu kukukhubazeka kunezinye?
7 Iifoto zeTattoos emva kokulahleka kobunzima
Kwenzeka ntoni emzimbeni wam xa ndifumana itattoo?
Masikhumbule kancinci kwenzeka ntoni emzimbeni wethu xa sifumana iitattoos ngaphambi kokubona okwenzekayo xa sisenza iinguqu, ngokungathi siyehla emzimbeni kwaye sityebe.
Ngokuyinene, Iitattoo zibandakanya ukubeka i-inki phantsi kwe-epidermisOko kukuthi, kwiderm. Ukuba oku bekungenjalo kwaye itattoo ibihlala kolona luhlu lubonakalayo lolusu, ibiya kuhlala iiveki ezimbalwa, njengoko iiseli zangaphandle zihlala ziguquka. Kungenxa yoko le nto umculi we tattoo kufuneka ehle kancinci.
Kuba itattoo isisilonda (kakuhle, amakhulu amanxeba emicroscopic) amajoni omzimba ayasebenza ukulwa isoyikiso kwaye athumele indawo kwindawo i-fibroblasts, uhlobo lweseli oluya kuginya enye inki ukuzama ukuyisusa. Ngokwenza lo msebenzi, sinokuthi siqwalasele ukuba ii-fibroblast "zezona zinetyala" lokuba le tattoo ilahlekelwe ngamandla njengoko iphilisa.
Kuthekani ukuba ndifumana itattoo kwaye umsipha uyakhula?
Ngoku sithethile malunga nento eyenzekayo emzimbeni wethu xa sifumana tattoo, lixesha lokuba sithethe ngalo yintoni ukulahleka kobunzima (okanye ukuzuza, njengakule meko) kuthetha iiTattoos. Ke, ngaba ukwanda kwezihlunu kuyayichaphazela inkangeleko yomvambo?
Impendulo emfutshane yile hayi.
Impendulo ende ethe kratya ithi ulusu lukulungele ukuthatha utshintsho lomzimba ngendlela elungeleleneyo, kwaye akunakulindeleka ukuba uqaphele naluphi na utshintsho kwi tattoo ukuba ufumene umsipha ngokwendalo (okt kancinci). Nangona kunjalo, ukuba une tattoo kwenye indawo ethambekele ekoluleni amanqaku (esiza kuthetha ngawo apha ngezantsi) kunokwenzeka ukuba iyakutshintsha.
Ndingaqhubeka noqeqesho ukuba ndifumana itattoo?
Omnye umbuzo obuzwa rhoqo onxulumene nesi sihloko kukuba ngaba singaqhubeka noqeqesho kwindawo yokuzivocavoca emva kokufumana itattoo, kwiiveki ezithathwayo ukuphilisa. Impendulo nguewe, kodwa ngaphandle kokuya ngaphezulu: kwiintsuku zokuqala kungcono ukuba uphumle ukuzola umzimba wakho kunye nokuchachae, ukongeza, ukuba inxeba liselitsha kwaye uyabila, kunokwenzeka ukuba wosulelwe. Nangona kunjalo, xa inxeba livaliwe kancinci (elixhomekeke kwinto nganye) uya kuba nakho ukuziqeqesha ngokuzolileyo kwaye ngaphandle koloyiko lokuba itattoo yakho iya kukhubazeka.
Kwenzeka ntoni kwiitattoos zam ukuba ndiyancipha?
Ukuba sifumana itattoo kwaye siphulukane neekilos ezimbalwa zobunzima, akuyi kubakho siphumo sibonakalayo kumvambo. Ayizukuchaphazeleka konke konke. Ngoku, ukuba sithetha malunga nokwehla kobunzima, umzekelo, iikhilogram ezingama-20, imeko iyatshintsha. Kunye neli nqaku sikubonisa ukudityaniswa kweefoto ezisibonisa ngaphambili nasemva kwabantu abaphulukene nobunzima kunye nendlela abajonga ngayo iiTattoos ngoku.
Ukuhlawula ingqalelo ekhethekileyo kwimifanekiso, siyaqonda ukuba uninzi lweeTatto ezazifudula zikhulu kakhulu kwaye zibonakala ziye "zancipha". Kwaye kwezona meko zinzima zokuhluka kobunzima, kwicala elinye nakwelinye, kwinqanaba elibonakalayo itattoo inokonakala, yenza ukuba kunyanzeleke ukuba kudlule isitudiyo se tattoo ukulungisa "umonakalo", nangona iyinto eyenzekayo Ngokukodwa kwiindawo apho amanqaku olula athanda ukuvela.
Ngakolunye uhlangothi, Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba, njengoko ubona kwimifanekiso, kwiimeko ezininzi, ukwehla kobunzima obuchaphazeleka kuchaphazela iitattoo, kodwa kungazikhubazi. Nangona ubungakanani bazo bungafani, zisalingana. Kwaye kumava am obuqu, ndingatsho ukuba kunjalo, iitattoo ziyachaphazeleka ngokotshintsho olwenzeka emzimbeni.
Ziphi iitattoos ezingenasiphene?
Phakathi kweendawo ezilungileyo zokufumana tattoo ngaphandle koloyiko lokukhubazeka, Kuya kufuneka sijonge ezo ndawo apho iimpawu zokoluka zingaveli kwaye ezo zithatha ixesha elide ukubonisa ukonyuka okanye ukwehla kobunzima, umzekelo, amaqatha, iinyawo, iingalo, amagxa ... .
Kunoko, kukho iindawo ezininzi eziphantse zaqinisekiswa ukuba zikhulu okanye zincinci ixesha elingaphezulu, umzekelo, ithumbu okanye isinqe. Oku kubaluleke ngakumbi kubantu abafuna ukuba nabantwana: kungcono ukuba nabo kuqala kunokwenza i-tattoo kuloo ndawo!
Ukongeza ekunciphiseni ubunzima bomzimba, kukho enye into enkulu enokumisela ukuba ngaba umvambo uya kukhubazeka ngokuhamba kwexesha: ubudala. A) Ewe, ukuba awufuni ukuba itattoo yakho ijongeke njengokuba ukhula, thintela indawo apho ulusu luthanda ukuguga kunye nengxowa, enjengentamo.
Eyokugqibela kodwa engancinananga, kuyacetyiswa ukuba uphephe indawo apho kukho amalungu, njengezihlahla, kuba ngokuhamba kwexesha ulusu luzinika kwaye lunokuchaphazela kakubi i-aesthetics ye tattoo.
Ngaba zikhona iitatoo ezithandwa kakhulu kukukhubazeka kunezinye?
Kwaye siphela siphendula omnye umbuzo malunga nokwehla kobunzima kwiitattoos, ukuba kukho uyilo olunokwenzeka ukuba lukhubazeke notshintsho kumava ethu omzimba kunabanye. Kanjalo, Iitattoos ezincinci zinokubonakala zingaqhelekanga emva kokufumana ubunzima okanye ilahlekoNgelixa ezona zinkulu zibonisa ukungafani.
Kwelinye icala, kwaye ngokufanelekileyo, Uyilo olulinganayo lukwanokubonisa utshintsho emva kokutshintsha kobunzima. Ngenxa yoluhlobo lwamaqhekeza alulo, naluphi na utshintsho lunokwenziwa lubonakale, kuba ubabalo luqulathe ngqo kuloo geometry yehipnotiki epholile. Kwezi tattoos, umzekelo, sinokubandakanya i-mandalas, ijiyometri okanye ubuhlanga.
Ukwehla kobunzima kwiitattoo kuchaphazela uyilo oluncinci kunokuba bekulindelweNgethamsanqa, nangona ukwazi imeko kakuhle ngaphambi kokuba ufumane itattoo kukunceda wenze esona sigqibo silungileyo, akunjalo? Khawusixelele, ngaba wehlile emzimbeni okanye wazuza ubunzima kwaye wenziwa itattoo? Kwenzeke ntoni kwiitattoos zakho, ngaba le nto siyithethileyo izalisekisiwe okanye, ngokuchaseneyo, yahluke ngokupheleleyo?
Iifoto zeTattoos emva kokulahleka kobunzima
Umthombo: I shishini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Ukuphulukana nobunzima obukhulu kuchaphazela iiTattoos: Le mifanekiso ityhila
chris umthandi sitsho
Ndine tattoo esifubeni sam kwaye inyani yayikukuba, kwakubuhlungu kakhulu, kukho ii-tatoo ezi-2, ezinye iileta kwicala lasekhohlo nakwicala lasekunene i-harlequin, okokuqala yayiyi-harlequin, ndathatha isifuba nekhwapha kwaye elona candelo lalilelona libuhlungu, ndincoma ukuba bayenze kwenye indawo kuba eyona nto ibuhlungu ngaphezu kwayo nayiphi na imibuliso
Phendula kumthandi chris